रोग र उपचार – Page2– MediaNP
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ०१२:१३0
दैनिक रुपमा एउटा स्याउ सेवन गर्नाले कुनै रोग नलाग्ने भनाई जताततै सर्वव्यतितै छ । साच्चै दैनिक स्याउँ खानाले कुनै अस्पताल वा डाक्टरको जरुरत पदैन् । विभिन्न शोधकर्ताको अनुसार दिनमा सय ग्राम स्याउ खाने हो भने
अनार शरीर स्वस्थ र फिट राख्नको लागी निकै महत्वपूर्ण फल हो । विशेषतः यसको जुसको सेवनले तौल नियन्त्रण गर्नलाई निकै सघाउँछ । अनारमा भिटामिन ‘ए’, ‘इ’, ‘सी’ फोलिक एसिड, एन्टी अक्सिडेन्ट, लगायतका अन्य तत्वहरु पाइने
गर्मी मौसममा पाइने खरबुजालाई अंधिकाश मानिसहरुले निकै मनपराएर सेवन गर्ने गर्दछन् । यो एक पानीले भरिएको स्वादिष्ट फल हो । यसमा करिब ९२ प्रतिशत भन्दा पनि बढि पानीको मात्रा पाइने गर्दा यसको सेवनले पानीको प्यास
जब कुनै व्यक्तिको शरीरमा कुनै प्रकारको रोग वा कुनै डर हुन्छ, तब भ्रम रोग हुने सम्भावना अधिक हुन्छ । यस्ता रोग लागेको मानिसलाई आफ्नो शरीरमा कुनै रोग नभएपनि आफूमा कुनै रोग वा बिरामी भएको जस्तो
बच्चाले औंला चुसेमा अमृत प्राप्त गर्दछन् भनेर अधिकाशले मानिसहरुले भनेर सामान्य रुपमा लिने गरेका छन् । प्राय बच्चाहरु करिब ३ देखि ७ वर्षको हुदाँ अधिक मात्रा औला चुस्ने गर्दछन् । विशेषतः बच्चाले बुढी औला चुस्दछन्
दाँतमा समस्या देखापर्नुको प्रमुख कारण दाँतको सफाइको कमी हुनु हो । खाना खाएपछि ब्रस नगर्ने बानी वा ब्रस हतार हतार नमिल्दो तरिकाले गर्नाले दाँतमा समस्या उत्पन्न हुन्छ । अक्सर मानिसहरु दाँतको सफाइ गर्न नजान्दा यस्तो
मलेरियाको घरेलु उपचार विधी !
मरेलिया लामखुट्टेको टोकाइबाट संक्रमण भई लाग्ने एक भयानक रोग हो । विशेषगरी यो रोगबाट एसिया, अफ्रिका तथा अफ्रिकाको मध्यद्धीपको उष्ण श्रेत्रका मानिसहरु प्रभावित हुने गर्दछन् प्रभावित हुनेमा वर्षमा ५१. ५ करोड मानिसहरु पर्दछन् ।लामखुट्टेको टोकेपछि
विवाह गरेको लामो समयसम्म बच्चा नहुनुको कारण यस्ता छन् !
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ०११:४९0
विवाह गरेपछि सबैजसो दम्पतीको चाहना बच्चा जन्माउने हुन्छ । बच्चाको विषयमा आमाबुबाले पनि त्यत्तिकै चासो देखाउने गरेका छन् । विवाह गरेको चारपाच वर्ष सम्म बच्चा भएन भने नेपाली समाजमा कुरा काट्ने चलन छ । समाज
यस्ता छन्, खुट्टा फुट्ने कारण ! (उपचार विधिसहित)
जाडोयाममा खुट्टा फुट्ने समस्यालाई एक सामान्य रुपमा लिइन्छ । यस्तो समस्याबाट अक्सर मानिसहरु पिडित भएका छन् । यसको मुख्य कारण भनेको सुख्खायाम, शरीरमा पानीको कमी हुनु, फंगल इन्फेक्सन, पसिना तथा चिसोको कारण, छाला रोग तथा
जान्नुहोस्, नासपाती सेवन गर्नुको ६ महत्वपूर्ण फाइदाहरु !
नासपाती एक वर्षायाममा पाइने निकै रसिलो मौसमी फल हो । मिठो र रसिलो फल भएको कारणले यसलाई धेरैले मनपराएर खाने गर्दछन्। मिठोको साथमा यो पोषक तत्वको भण्डार पनि हो । यसमा खनिज, पोटासियम भिटामिन सी,